स्काइप खाता कसरी बनाउने: सबै तरिकाहरू | ग्याजेट समाचार
स्काईप धेरै वर्षको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। सुरुमा यो कम्प्युटरमा मात्र प्रयोग गर्न सक्दछ, यद्यपि वर्षौंसम्म हामी यसलाई मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटमा डाउनलोड गर्न सक्दछौं। यो अनुप्रयोग मुख्य रूपले परिचित भयो किनकि यसले हामीलाई हाम्रा साथीहरू र परिवारलाई नि: शुल्क कलहरू र भिडियो कल गर्न अनुमति दियो। एउटा समारोह जुन आजसम्म पनि यो सबैभन्दा लोकप्रिय छ।
यो सम्भव छ कि तपाईं मध्ये धेरैजनाको यसमा पहिले नै खाता छ। यद्यपि अन्यसँग स्काईप खाता नहुन सक्छ, तर चाहानुहुन्छ। यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी गर्न सक्दछौं। त्यहाँ खाता खोल्नको लागि केहि तरिकाहरू छन् प्रसिद्ध अनुप्रयोगमा। यहाँ हामी तपाईंलाई यो कसरी सम्भव छ बताउँछौं।
1 यदि तपाईंसँग हटमेल / आउटलुक खाता छ
2 Skype मा एक खाता बनाउनुहोस्
3 खाता जानकारी परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग हटमेल / आउटलुक खाता छ
धेरै प्रयोगकर्ताहरू, विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जसले आफ्नो कम्प्युटरमा विन्डोज प्रयोग गर्छन्, सायद माइक्रोसफ्ट खाता हुन सक्छ। साथै हटमेल खाता (वर्तमानमा आउटलुकमा रूपान्तरित) हामीले प्रयोग गर्न सक्ने कुरा हो। यसको मतलब यो हो हामीले स्काईपमा नयाँ खाता सिर्जना गर्नुपर्दैन। यो खाताको ईमेल ठेगाना र हामीले यससँग सम्बन्ध राख्नु भएको पासवर्डको प्रयोग गरेर अनुप्रयोगमा लग इन गर्नु आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यो वास्तवमै सहज विकल्प हो।
यो सम्भव छ किनकि स्काईप माइक्रोसफ्टको स्वामित्वमा छ। यस कारणका लागि, प्लेटफर्ममा खाताहरू सम्बन्धित छ, ताकि एक Microsoft खाताले तपाइँलाई सबै कम्पनीका सेवाहरू सिधा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, ती प्रत्येकमा खाता सिर्जना गर्ने आवश्यकतालाई वेवास्ता गर्दै, विगतमा जस्तो थियो। यस प्रणालीले हामीलाई धेरै समय बचत गर्दछ, साथ साथै नयाँ पासवर्डहरू सिर्जना गर्न बेवास्ता गर्दछ।
त्यसकारण, तपाईलाई चाहिएको भनेको तपाईको कम्प्युटर वा स्मार्टफोनमा स्काइप डाउनलोड गर्नु हो, संस्करणमा निर्भर गर्दै तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। जब तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ, यसको गृह पृष्ठमा, जहाँ तपाईंलाई लगइन गर्न वा खाता सिर्जना गर्न सोधिन्छ, तपाईंले भर्खर खाता ठेगाना र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए, तपाईं सामान्यको रूपमा अनुप्रयोग भित्र हुनुहुन्छ।
Skype मा एक खाता बनाउनुहोस्
तर त्यहाँ सम्भावित प्रयोगकर्ताहरू छन् जससँग माइक्रोसफ्ट खाता छैन। यस अवस्थामा, यदि तपाई स्काईप प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले अनुप्रयोगमा खाता बनाउनु पर्छ। प्रक्रियाले वास्तवमा यस सम्बन्धमा कुनै पनि जटिलता प्रस्तुत गर्दैन। चाहे हामी फोनमा वा कम्प्युटरमा गर्छौं, हामीले पहिले त्यो उपकरणमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एन्ड्रोइड र आईओएसमा यो स्टोरबाट गर्न सकिन्छ, माइक्रोसफ्टका लागि हामी गुगल खोजी गर्न सक्दछौं, स्काइप वेबसाइटमा वा माइक्रोसफ्ट स्टोर प्रयोग गर्न सक्दछौं।
एकचोटि डाउनलोड र स्थापना भएपछि, हामी यसलाई खोल्छौं र अनुप्रयोगको गृह पृष्ठमा जान्छौं। पाठको साथ स्क्रीनको बीचमा सेतो बटन देखा पर्दछ «लगईन वा सिर्जना गर्नुहोस्«। तपाईंले यस बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, ताकि स्क्रिनमा नयाँ बक्स देखा पर्नेछ। यसमा, तपाईंलाई खाता प्रविष्ट गर्न भनियो, यदि तपाईंसँग एउटा छ भने। यो विकल्पको तल मात्र एउटा पाठ छ जुन भन्छ »खाता छैन? एउटा सिर्जना गर्नुहोस्। " यो विकल्पमा हामीले थिच्नु पर्छ।
Skype मा एक खाता बनाउने प्रक्रिया तल खुल्छ। सोधिने पहिलो चीज भनेको फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नु हो। यद्यपि तल हामीसँग विकल्प छ जुन हामीलाई बताउँछ हामी यसको सट्टा ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्न सक्छौं। प्रत्येक एक अनुप्रयोग मा एक खाता गर्न यस सन्दर्भ मा सबैभन्दा उपयोगी देखिन्छ के छनौट गर्न पर्छ। एकचोटि तपाईंले ईमेल वा फोन प्रविष्ट गर्नुभयो, तपाईंले त्यस खाताको लागि पासवर्ड सिर्जना गर्नुपर्नेछ। हामीले तपाईंलाई पहिले नै भनिसक्यौं, त्यहाँ कडा पासवर्ड बनाउन को लागी धेरै दिशानिर्देशहरु छन्, जो पूरा गरिनु पर्छ।
पासवर्ड प्रविष्ट गरेपछि, स्काईपले हामीलाई हाम्रो पहिलो र अन्तिम नाम प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्दछ। तपाइँ आफ्नो उपनाम प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो राम्रो हो वा कोडनेम प्रयोग गर्नुहोस्। यो त्यस्तो अनुप्रयोग हो जुन अनुप्रयोगमा प्रोफाइल सिर्जनाको लागि आवश्यक छ। यद्यपि हामीसँग सँधै सम्भावना छ यसलाई पछि कन्फिगरेसनमा परिमार्जन गर्न, हामीसँग एक पटक खाता छ। यी डाटा पछि, तपाईले देश र खाता प्रयोगकर्ताको जन्म मिति प्रविष्टि गर्नुपर्छ।
जब यो सकियो, एक पुष्टिकरण ईमेल प्रयोग गरीएको खातामा पठाइनेछ, वा फोन नम्बरमा एसएमएस। दुबै केसहरूमा, कोड प्रविष्ट गरिएको छ, कि हामीले स्काईपमा पछि टाँस्नु पर्छ। जब हामीसँग यो कोड छ, केवल निलो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यी चरणहरूको साथ, खाता निर्माण प्रक्रिया अब पूर्ण भयो। त्यसोभए हामी अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्दछौं।
स्काईपले अब तपाईंलाई खाता बिना नै सेवा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ
खाता जानकारी परिवर्तन गर्नुहोस्
स्काइपले हामीलाई खाता सिर्जना गर्न अनुरोध गरेको जानकारी साँच्चै औपचारिकता हो। अनुप्रयोगमा खाता खोल्न वा प्रोफाइल खोल्नको लागि हामीले यस जानकारी प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। यद्यपि सत्य यो छ कि हामी पछि गर्न सक्छौं यस जानकारीलाई परिमार्जन गर्नुहोस् यदि हामीलाई आवश्यक लाग्छ भने। त्यसोभए तपाईं ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर, प्रोफाइल नाम वा जन्म मिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंलाई सोच्नुहोस् कि त्यसो गर्नु राम्रो हो। त्यसोभए यो त्यस्तो चीज हो जुन सँधै सम्भव हुन्छ। थप रूपमा, यसलाई गर्ने तरीका अनुप्रयोगमा साँच्चिकै सरल छ।
एक पटक हामीले स्काईपमा लगईन गरेपछि, हामीले स्क्रीनको माथिल्लो बायाँ हेर्नुपर्नेछ। त्यहाँ हामी देख्नेछौं कि हाम्रो नाम एप्लिकेसनको खोजी पट्टी भन्दा माथि देखा पर्नेछ। हाम्रो नामको दायाँमा तीन-अ point्कको आइकन छ, तीन अण्डाकार जस्ता। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ कन्टेक्स्ट मेनू खोल्नका लागि। यो मेनूमा, कन्फिगरेसन विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्.
यहाँ हामी चाहिएको डेटा बदल्न सक्षम हुनेछौं। यदि हामी फरक प्रोफाईल नाम लिन चाहान्छौं, वा खाताको लागि नयाँ ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्दछौं भने हामी यो सेक्सनबाट गर्न सक्दछौं। यसलाई परिवर्तन गर्न धेरै सजिलो छ, साथै यो हामी सक्षम जब गर्न चाहन्छौं। यस सम्बन्धमा स्काईप एकदम लचिलो अनुप्रयोग हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » स्काइप खाता कसरी बनाउने